Madaxwaynaha DDSI Oo Maanta U Anbabaxay Adhis Ababa Kana Qayb Qaadanaya Wareegii Labaad Ee Shirwaynaha Dhaq-dhaqaaqa Maamulka Horumarka Ee Dalka Oo Barito Ka Furmi Doona Xarunta Adhis Ababa. - Cakaara News
Madaxwaynaha DDSI Oo Maanta U Anbabaxay Adhis Ababa Kana Qayb Qaadanaya Wareegii Labaad Ee Shirwaynaha Dhaq-dhaqaaqa Maamulka Horumarka Ee Dalka Oo Barito Ka Furmi Doona Xarunta Adhis Ababa.
Adhis-Ababa(CN) Arbaco-13-Aug-2014, Madaxwaynaha DDSI Mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa maanta u kicitimay dhinaca xarunta Adhis Ababa si uu uga qayb qaato kulan waynaha labaad ee dhaq-dhaqaaqa maamulka horumarka oo maalinta bari ah ka dhici doona Hoolka Mileeniyaamka ee magaalada Adhis Ababa. Waxaana Madaxwaynaha ku wehelinaya kaqaybgalka shirkaasi masuuliyiin ay kamid ahaayeen Afhayeenka baarlamanka ahna gudoomiyaha xisbiga mudane Maxamed Rashiid Isaaq, Madaxa xarunta dhexe ee XDSHSI lehna awooda madaxwayne kuxigeen Mudane Cabdicasiis Maxamed iyo wasiirka Adeega Shacabka Mudane Khadar Cabdi Ismaaciil.
Shirwaynahan wareega labaad ee dhaq-dhaqaaqa maamulka horumarka ayaa waxaa soo qaban qaabisay Wasaarada Adeega Shacabka ee DFI ee ay masuulka katahay Marwo Aster Mamo lehna awooda R/wasaare Kuxigeen. Wuxuuna shirwaynuhu si toos ah barito uga furmi doonaa Hoolka Millennium ee caasimada Adhis Ababa.
Kulankan oo uu hogaaminayo R/wasaaraha DFI Mudane HaileMariam Desalegn ayaa waxaa kasoo qayb galaya Madaxwaynayaasha 9-ka Dawlad Deegaan iyo masuuliyiin kala duwan iyadoo ay Shirwaynahan isku arkaan 3-da qaybood ee ay dawladu ka koobantahay-sharci dajinta, sharci fulinta iyo shirci-ilaalinta. Sidoo kale waxaa iyaguna kasoo qaybgala shirkan qaybaha kala duwan ee shacabka maadaama fooramkan lagu gorfeeyo hawlaha maamulka iyo horumarka.
Kulan waynahan ayaa looga gol leeyahay si loo xaqiijiyo horumarka iyo jihooyinka maamulka suuban ee kaga aadan dawlada sanadka bilowga ah ee 2007-da T.I. Waxaana shirkan wadatashi balaadhan looga yeeshaa dhamaan hawlaha maamulka horumarka iyo jihooyinka lagu xaqiijiyo in lagaadho qorshayaasha dhaadheer ee guud ahaanba Itoobiya ay hiigsanayso. Wuxuuna furmayaa subaxnimada barito oo ku beegan khamiista 14 bisha August.